MacOS Mojave ကို "မထောက်ပံ့သော" Mac တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း ငါက Mac ပါ
MacOS Mojave ကို "မထောက်ပံ့သော" Mac တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
MacOS Mojave ကိုထိုကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းသည် Apple အားတရားဝင်မတင်ပေးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် နှင့်ယနေ့ငါတို့မြင်သွားကြသည်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် Apple မှကျွန်ုပ်တို့၏မထောက်ပံ့သော Mac များပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခွင့်ပြုသကဲ့သို့ရိုးရှင်းမည်မဟုတ်ပါ။
အကောင်းဆုံးကတော့တည်ဆောက်သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာတစ်ခုကိုတီထွင်လိုက်တာကရှုပ်ထွေးတဲ့ installation ကိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပေမဲ့သူကတောင်လုပ်နိုင်တယ် ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါ၊ သင်၏ခြေလှမ်းများကိုလိုအပ်သည်။ Patch Updater လို့ခေါ်တဲ့ patch တွေကို update လုပ်ဖို့ tool တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာတန်ဖိုးထားရမယ်။
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ အချစ် နာရီဝက်အောက်မှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းမြင်နိုင်တာပေါ့။ macOS Mojave ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ဗွီဒီယိုနှင့် dosdude1 မှပြုလုပ်သောတပ်ဆင်မှုအတွက်ဖန်တီးခဲ့သော patch ကိုချန်ထားရန်လိုအပ်ချက်များစွာလိုအပ်သည်။ 16GB USB တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါတွေအားလုံးကိုဗီဒီယိုဖော်ပြချက်မှာတွေ့နိုင်ပြီးဗီဒီယိုအောက်မှာချထားပါတယ်
နောက်ပိုင်းတွင် Mac Pro, iMac, သို့မဟုတ် MacBook Pro 2008
MacBook Air သို့မဟုတ် MacBook Unibody လူမီနီယံ - ၂၀၀၈ နှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်
White Mac Mini (သို့) MacBook ၂၀၀၉ အစောပိုင်း
Xserve 2008 အစောပိုင်းကသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း
Mac စာရင်း ဒီစနစ်နှင့်ပင်သဟဇာတမဟုတ်ပါ တပ်ဆင် သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
macOS Mojave ကို update လုပ်နည်း
2006-2007 Mac Pro, iMac, MacBook Pro နှင့် Mac Mini
CPU ကို Penryn အခြေပြု Core 7,1 Duo သို့ T2007 ကဲ့သို့အဆင့်မြှင့်တင်လျှင် ၂၀၀၇ iMac2 ကိုသာထောက်ပံ့သည်
MacBook4,1 - ၂၀၀၈ မှ MacBook Air (MacBookAir2008)
အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဒီကိရိယာရှိဖို့ပဲ Patcher Tool ကိုလက်စွဲနှင့်ဗွီဒီယိုဖော်ပြချက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုလိုအပ်ပါကအဆင့်များလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါက developer ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်သည် ဤအပေါငျးတို့သ installation ကိုလက်စွဲအသေးစိတ်။ MacOS Mojave ကသင်၏ Mac ကိုအထောက်အပံ့မပေးနိုင်သည်ကိုသင်မြင်နိုင်ရန်သင်လိုအပ်သမျှရှိပြီ ဖြစ်၍ သင်ဤ installation ကိုလုပ်ခြင်းသည်မထိုက်တန်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
MacOS Mojave ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြောရမှာက၊ ဒီဟာ Mac သုံးစွဲသူအားလုံးအတွက်မဟုတ်ဘူး ၎င်းသည်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်မလွယ်ကူပါ၊ ထို့အပြင်ဂရပ်ဖစ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပြproblemsနာများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်လုံးလုံးလျားလျားအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါက WiFi ဆက်သွယ်မှု၊ Bluetooth၊ trackpad အတွင်းရှိကျရှုံးမှုများသို့မဟုတ် အလားတူ။ ဤသင်ခန်းစာကိုတီထွင်သူနှင့်တီထွင်သူကကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးသောအရာဖြစ်ပြီး၊ MacOS Mojave ချွတ်ယွင်းမှုများဖြစ်ပေါ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်လာရမည့်အရာမဟုတ်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါအထက်ဖော်ပြပါများအတွက်နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်, အလုပ်သို့မဟုတ်အလားတူများအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်တပ်ဆင်အကြံပေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်သာမန်ထက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးတာတွေပိုတပ်ဆင်တာအပြင်၊ MacOS Mojave ကိုအထောက်အပံ့မပေးဘဲအရာရာတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mac ပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး တစ်ခုချင်းစီ၏တာ ၀ န်မှာတပ်ဆင်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်မလုပ်ရန်ဖြစ်သည် နှင့် Soy de Mac အဖွဲ့သည်တပ်ဆင်မှုမှပေါ်ပေါက်လာနိုင်သောပြproblemsနာများအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » MacOS Mojave ကို "မထောက်ပံ့သော" Mac တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Josep Perez ဟုသူကပြောသည်
ပထမ ဦး စွာသင်၏အလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Mojave ကိုကျွန်ုပ်၏ iMac 12,2 တွင်တပ်ဆင်ပြီးနည်းလမ်းမှာအလုပ်လုပ်သည်။ ပြန်လည်စတင်ပြီးသည်နှင့်အရောင်များအားလုံးပြောင်းလဲသွားသည်။
မေးခွန်းကထိုက်တန်ပါ့မလား။ နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တွေအများကြီးကိုဆုံးရှုံး? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မွမ်းမံတဲ့အခါမှာသူကကျရှုံးမှုဖြစ်နိုင်တယ်၊ ခြစ်ရာကနေစရမယ်ဆိုတာကိုသတိပေးရုံသာမကစွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းပြောစရာလည်းမရှိဘူး
ငါက 2010 ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းကနေ Imac ကို install လုပ်ရှိသည်နှင့်အရောင်များကိုပြောင်းလဲနေကြသည်နှင့်ဂရပ်ဖစ်မကောင်းတဲ့။ ပြတင်းပေါက်များကိုရွှေ့ခြင်းကသူတို့ကိုသော့ခတ်သည်။
မင်္ဂလာပါ။ ငါမှာအတူတူပဲပြproblemနာရှိတယ်။ အရောင်များကိုပြောင်းလဲနေကြသည်နှင့်အနီရောင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။
ငါ join, အရောင်များနှင့်အတူအခြားသူများကဲ့သို့ငါဖြစ်ပျက်
ငါက 2009 နှောင်းပိုင်းတွင် MacBook Unibody တွင် install လုပ်ပြီးအလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ ငါသည်လည်း၎င်းကို 2010 MacBook Air တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး၎င်းသည်လည်းကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ Installation အဆုံးမှာမော်ဒယ်တစ်ခုစီအတွက် patch ၏ developer မှသတ်မှတ်ထားသောရွေးစရာများကိုပြင်ဆင်ပြီးပြီလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ သိပ်မကောင်းပါဘူး ၎င်းသည်အလွန်နှေးကွေးသည်။ ပထမနေ့တွင်ပင်စနစ်ပျက်သွားသည်။ ဒါ့အပြင် Parallels များနှင့် virtualbox များလည်းအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည် windows XP မဟုတ်လျှင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ငါ OS X El Capitan ကိုပြန်သွားရတော့မယ်။ အားလုံးပြီးပြည့်စုံသွားပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ MacBook Pro 17″ ၅.၂၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင် SSD 5,2GB RAM သည်သူတပ်ဆင်နိုင်သမျှအများဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမထည့်သွင်းမီစဉ်းစားပါ။ နှုတ်ဆက်ခြင်း
MacBook Pro 13 » ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်
ဂရပ်ဖစ်: Intel HD Graphics 3000 512 MB၊
ပရိုဆက်ဆာ: 2,4 GHz Intel Core i5
16 gb သိုးထီးနှင့် ssd ။
ပြproblemနာမရှိပဲတပ်ဆင်ထားပေမယ့်အခြားသုံးစွဲသူများပြောတာကတော့ graph ပေါ်မှာ patch နဲ့အတူကျွန်တော်တောင်သတိမပြုမိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် pc, virtualbox နဲ့အခြားဖွံ့ဖြိုးရေး (သို့) ဒီဇိုင်းပရိုဂရမ်တွေဟာအရမ်းနှေးနေရင်၊ ငါတောင်မှမင်းကိုမပြောဘူး။
ငါ Mojave မှာသူတို့မိတ်ဆက်ပေးသောမှောင်မိုက်သည့်အကြောင်းအရာကိုတကယ်သဘောကျသည်။ သို့သော်ငါ Mac အတွက်နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်သည်မှာကျွန်ုပ်အတွက်မထိုက်တန်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ laptop အတွက်အလွန်အမင်းညံ့ဖျင်းသည်။
patch +1 ကိုတီထွင်သူအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်သည်။
Ruben Reyes ဟုသူကပြောသည်
အဆိုပါ input ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Mojave ကို Macbook pro 2011, model 8.2 တွင်တပ်ဆင်ပါ။ အဓိကပြcomplနာများမရှိဘဲ။ ငါ patch developer လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ သို့သော်၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်သူများသည် Mojave ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်၎င်းသည်စတင်မည်မဟုတ်ပါ။ usb မှတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် boot နှင့် patch ကို run ရမည်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာသူတို့သည်သင်၏ Mac ပုံစံကိုရှာဖွေပြီးသက်ဆိုင်ရာ patch ကိုအသုံးပြုသည်။ အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်၏မော်ဒယ်လ်တွင်အထူးပြုလုပ်ထားသော radeon ဂရပ်ဖစ်များသည်အရှိန်နှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ငါနောက်ဆုံးဖြတ် pro ကိုဗားရှင်း 10.4.5 install လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့နှင့်ကဂရပ်ကိုထောက်ပံ့မထားဘူးကပြောပါတယ်။ သို့သော်ဤ developer မှအခြားသင်ခန်းစာတစ်ခုအရငါ radeon ဂရပ်ဖစ်နှင့် voila ကို hd 3000 ဖြစ်သော Final cut pro ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောဂရပ်ဖစ်ဖြင့်ပိတ်ထားသည်၊ နောက်ဆုံးဗားရှင်းမှာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ အထူးဂရပ်ဖစ်ဂရပ်ဖစ်ကိုပိတ်ထားရင်အဖုံးပိတ်ချိန်မှာတောက်ပမှုထိန်းချုပ်မှုဟာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ တစ်ခုအတွက်တစ်ခု နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ ငါပြောခဲ့တာ မှလွဲ၍ အရာရာတိုင်းသည်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဂရပ်ကိုပိတ်ခြင်းမရှိပဲချန်ထားနိုင်သော်လည်းအလျင်လိုအပ်သောနောက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ Logic pro x လိုမျိုးအခြားသူတွေကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကလည်းအတော်လေးကောင်းတယ်။ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာမှာအတော်အသင့်အဆင်ပြေတာတောင်မှဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်တဲ့ High Sierra ၏အိပ်မက်ဆိုးထက်ဆယ်ဆပိုကောင်းသည်။
Rubén Reyes ကိုပြန်ပြောပါ
MacBook Pro ကို ၂၀၀၉ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်
8GB RAM ကို
Fusion Drive ၁.၁၂ တီဘီ
အလုပ်မလုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ iSight ကင်မရာဖြစ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်ကအရမ်းချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီး၊ ဒီ model ရဲ့ဂရပ်ဖစ်ဟာ ATI မဟုတ်ဘဲ nVidia ဖြစ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းများ၏ကျန်ကြီးလှ၏။
အလက်ဇန်းဒါး ,. ဟုသူကပြောသည်
ကားလို့စ်၊ မင်းကိုဘယ်လိုအကြံဥာဏ်ပေးရမလဲ။ ဂရပ်ဖစ်ကို Final မှာကြည့်လို့မရဘူး။ Photosho ကအရမ်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ် editing program မှာမှငါမမြင်နိုင်ဘူး။
, Alejandro အားပြန်လည်ပြောကြားခြင်း, ။
အဆိုပါ Dude ဟုသူကပြောသည်
Installation ဖိုင်ကိုဘယ်လို download လုပ်ခဲ့သလဲ။ AppStore မှာသူကကျွန်တော့်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောတယ်။
The Dude အားပြန်ပြောပါ
အိုကေ။ ငါကဒါကို patcher နဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရတယ်
ငါ 2011 ခုနှစ်အစောပိုင်း 13 လက်မအရွယ် Macbook လိုလားသူ 2011 ခုနှစ်, ရှိသည်
ပရိုဆက်ဆာ: 2.3GH3 intel core i5
မှတ်ဉာဏ်: 8GB 1333 mH3 DDR3
ဂရပ်ဖစ်: intel HD ဂရပ်ဖစ် 3000 512 MB
သငျသညျ maverick ကနေ Mojave သို့ပြောင်းလဲနိုင်လျှင်သိလို? ဖြစ်နိုင်လျှင် App Store မှဒေါင်းလုပ်ရယူရန်မရရှိနိုင်ပါကမည်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း ???
မင်္ဂလာပါ၊ Apple အရထိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်တပ်ဆင်နိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးမှာ -
ဆောင်းပါး၏သင်ခန်းစာအရ Mojave ကိုသင်ထိုအသင်းတွင်သင်သွားနိုင်၊ မနိုင်ဆိုတာကိုငါမသိ
ဒါဟာငါ့အဘို့ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်ခဲ့! ၂၀၁၁ ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင် Ram မှ Core i2011 နှင့် 5G Macbook ကိုထုတ်လွှင့်သည်။
အသုံးချပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများအလုပ်လုပ်ပြီးအရာအားလုံးသည်ကောင်းမွန်ပြီး Sierra ထက်မြင့်မားသည်
သင် dosdude1.com သင်ခန်းစာအတိုင်းလိုက်နာပါကသင်ဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းထိုအရပ်မှ Mojave မှဆင်းနိုင်ပါတယ်။
ငါအဲဒါကို 2009 MacBook Pro (16 Gb RAM and SDD) မှာသုံးတယ်။ အမှန်တရားမှာပြproblemsနာမရှိဘူး။ ငါရုံး, Photoshop သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစုံတခုကိုမသုံးကြဘူးဟုပြောရမည်။ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောရုံးအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်၌ဂူဂဲလ်ပရိုဂရမ်များရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်ကျန်ရှိသောအရာနှင့်အတူ။
သို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်၌မေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လုပ်ရန်မလိုသော Big Sur သို့အဆင့်မြှင့်ရန်ထပ်ခါထပ်ခါပြောထားသည်မှာအနည်းဆုံးတော့မပြောနိုင်ပါ။ ထိုအခါငါကစတင်နိုင်သည်ကိုအလေးအနက်သံသယရှိသည်။ သို့သော်ဤ update ကိုလက်မခံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားစေမည့်ကျန်ရှိသော update များကို download လုပ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ မဆိုအကြံပြုချက်?
tvOS 12.0.1 ကိုသုံးစွဲသူများအားလုံးရရှိနိုင်ပါသည်
ယခုစိတ်ကူးကောင်းသော Alto's Adventure ကို Mac App Store တွင်ရနိုင်သည်